I-China Medical Air Mattress A02 Imveliso kunye neFektha | Hongzhu
Unyango lweMoya zoNyango A02
Ukunikezwa amandla I-220V / 50-60Hz
Ubungakanani obuqhelekileyo 80 "(L) x32-36" (W)
Uluhlu loxinzelelo I-50mmHg-120mmHg
Isigqubuthelo esiphezulu I-Nylon PU / amandla
Ixesha lomjikelo 12 imiz
Iiseli zomoya I-Nylon / PVC / TPU
Ukutya umbane 7W
Ezantsi I-Tarpaulin / i-nylon PU
Ubunzima beemvakalelo 5.5-6.5kg
Ubungakanani 27,5 (L) * 13.5 (W) * 9 (H) cm
Ubunzima bomzimba 135-145kg
I-CPC, isihluzi, fuse, intsholongwane, ukhetho lwe-ventilate; Inkqubo yempompo yeAluminium / AB, inketho yokutshintsha kwe-ABC
1. Impompo yomoya: Ukukhutshwa koshishini womoya kuzisa i-7-8 / min inkxaso kakhulu. Ingxolo epholileyo yempompo ephantsi, ngezantsi kwe-20db, ineqhina, kulula ukuhlengahlengisa uxinzelelo olusisigxina, kulula ukuba ibekwe kwisakhelo sebhedi.
2. Indawo yokucoca umoya: igumbi lomoya elityhutyha kulula ukuthatha indawo yalo kunye nokucoceka, kusebenza ngokulula kunye nokusebenza kwezoqoqosho kulungile, ukungabi manzi, ikhava elibuyiselekayo elifihliweyo kumbhobho wokutywina kuqina, ukuchasana nobungangamsha bendlela kuya kwenza ukuba kube lula ukuba ungene endaweni kwaye uyilungise. Gubungela umatrasi ukuze uwukhusele ungqengqe phezu kwebhedi
1. Isembozo semoto yompompo senziwe ngealuminiyam kwaye sisebenza buthule.
2. Izinto zonyango zePVC zaseTaiwan, ziziva zibushelelezi, zibude bude
3. Umatshini womoya welding ngowona matshini wewelding uqhubele phambili ngexesha elinye. I-United States kuphela enayo le teknoloji eTshayina.
Jonga umgangatho we-mattress yomoya ngamnye ngaphambi kokupakisha. Izixhobo zonyango, umatrasi ongenaxabiso, umatrasi oshushu
Ukuba ufuna ulwazi oluthe kratya malunga nonyango lwe-cushion yomoya, nceda unxibelelane nathi. Sisoloko sikulungele ukuphendula imibuzo yakho malunga nokupakisha, ukuhambisa izinto, ukuqinisekiswa okanye nayiphi na enye into yoomatrasi bezonyango, oomatrasi bomoya ababhetyebhetye. Ukuba ezi mveliso azizifikeleli iimfuno zakho, nceda unxibelelane nathi, sizimisele ukubonelela ngolwazi oluchanekileyo.
Udidi lweMveliso: isibhedlele somoya esibhedlele
Edlulileyo: Ukuhambahamba kweHemiplegic kubantwana
Okulandelayo: Unyango lweMoya zoNyango A04
Uxinzelelo lomoya kwi-Medical Bed
Ukutshintsha uxinzelelo lomoya kwiPad
Ukutshintsha Uxinzelelo loMoya
Ukutshintsha uxinzelelo lwePad kunye neMpompo
Umsinga woMoya oBanzi wokuNgenelela
Unyango lweMoya yoNyango ngeMpompo
Unyango lweMoya zoNyango A04